Izixhobo zokukhusela, izixhobo zeBioaerosol ezinxulumene noko-uJunray
Qingdao Junray Intelligent Isixhobo Co., Ltd.
Ikhabhathi ye-Biosafety kunye negumbi elicocekileyo
Izixhobo ezinxulumene neBioaerosol
Izixhobo kunye nezinto ezisetyenziswayo
Sinikezela ngeMveliso eziPhambili zoMgangatho
I-Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd. yasekwa ngo-Agasti 2007. Ishishini lesizwe eliphezulu lobuchwephesha eligxile kwi-R & D yezixhobo zokukhangela. Sibonelela ngokukhuselekileyo nangokuthembekileyo izixhobo zokufumanisa kunye neenkonzo ekubekeni iliso kwindalo esingqongileyo, ukukhuseleka, ukulinganisa kunye nokulinganisa.
I-Qingdao Junray Intelligent Instrument Co, Ltd inenkqubo epheleleyo ye-R & D kunye nokusebenza kwayo, ngoku inamasebe asi-8 kubandakanya itekhnoloji, elebhu, oomatshini, uyilo lweshishini, inkqubo yokuvavanywa kwetyala, inabasebenzi abangaphezulu kwama-90.
I-ZR-1211 Mask yokuvavanywa kokuphefumla
I-ZR-1006 Mask yePartic yeFiltration Efficiency ...
Isigqumathelo seMask yeBacterial Filtration Efficiency (BFE)
I-ZR-2021 isampulu yesampulu encinci yomoya
I-ZR-2021 Isampulu yesampulu yentsholongwane yomoya isetyenziselwa ukuqokelela iintsholongwane.
I-ZR-2050A isampuli yentsholongwane yomoya
I-ZR-2050A isampuli yentsholongwane yomoya yinqanaba eliphezulu lokusebenza ngesampulu enye yesampulu yesampulu.
I-ZR-1013 Biosafety esemgangathweni yomvavanyi
I-ZR-1013 Biosafety quality tester tester ZR-1013 Biosafety kwikhabhinethi yovavanyo esemgangathweni
Isixhobo esitsha sokulwa ubhubhane, ukuvavanya ukusebenza kakuhle kwemaski kukhutshiwe!
I-ZR-1006 Model A (Ityuwa) / iModeli B (ioyile) yemaski yokuhluza ukusebenza kokuvavanywa kokuvavanywa kokuhamba komoya kusebenza kumgangatho wokujonga kunye nokuhlola amaziko ezonyango, amaziko okulawula izifo, amaziko okuhlola amalaphu, izibhedlele, imas R & D kunye .. .
Ukwazisa inzululwazi ution Isisombululo soKhuseleko lwebhayiloji kuLwabiwo-mhlaba kuJunray
JJF 1815-2020 Calibration Ukucaciswa kweClass ll Biosafety Cabinets Biosafety cabinet (BSC) yinto enefuthe lokuhluza uxinzelelo olungephi kunye nekhabhathi yomoya, enokuthintela umqhubi kunye nokusingqongileyo ekubeni baboniswe ...
Imeyile:ukuthumela @ zryq.cn
Idilesi:No.1 XueYue Road, Chengyang District, Qingdao, Shandong kwiPhondo, China